Somalia: Laanta Af Ingiriisiga Ee BBC-da Oo Warbixin Qoto-dheer Ka Diyaarisay Weerarkii Xeebta Liido Ee Magaaladda Muqdisho - Wargane News
Home Somali News Somalia: Laanta Af Ingiriisiga Ee BBC-da Oo Warbixin Qoto-dheer Ka Diyaarisay Weerarkii...
Somalia: Laanta Af Ingiriisiga Ee BBC-da Oo Warbixin Qoto-dheer Ka Diyaarisay Weerarkii Xeebta Liido Ee Magaaladda Muqdisho
laanta af ingiirisiga ee idaacadda BBC-da, ayaa warbixin qoto-dheer ku sharaxday qaraxii iyo weerarkii AL-Shabaab ku qaaday xeebta Lido ee ay ku dhinteen in ka badan labaatameeye qof.
Warkan oo lagu daabacay shabakadda laanta af ingiriisiga ee BBC-da, ayaa lagaga sheekeeyay dhacdadaas iyo sidii ay ku bilaabantay. shabakadda Wargane oo soo turjuntay warbixintaasi oo u qornayd sidan:-
“Ciidammadda ammaanka Soomaaliya, ayaa dib ula wareegay gacan ku haynta huteelka xeebta ku dhinac yaalla ee magaaladda Muqdisho, ka dib weerar dhimasho keenay oo islaamiyiinta Al-shabaab ka fuliyeen.
Dabley hubaysan ayaa qabsaday Huteelka Lido, iyagoo rasaas ku furay dadkii casheynayay makhribnimadii habeenkii khamiistii.
Labaatan qof ayaa kooxda Al-shabaab ku dishay,iyagoo adeegsaday laba baabuur oo qarxay. Kooxda al-shabaab ayaa sheegatay inay ka dambeysay qaraxan.
Ciidammadda ammaanka ayaa ku go’doomiyay dableydii fulisay weerarkan illaa muddo siddeed saacadood lagu qadaray.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Hoggaamiyihii weerarkan la xidhay. Ra’ysul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa weerarkan ku sifeeyay mid “Waxshinimo ah”
Waxa jira war kala duwan oo la xidhiidha sidii uu weerarkani ku bilowday. Waxay u muuqataa in baabuurkii ugu horeeyay uu baxay markii wakhtigu ahaa 16:30GMT ee fiidnimadii habeenkii khamiista.
“Waxay si aan loo aabo-yeelaynin ugu furayeen rasaasta dadkii fadhiyay meel u dhow xeebta, ka hor intii aanay gelin Huteelka,”goob-jooge Axmed Nuur, ayaa sidaas u sheegay Associated Press.Booliska ayaa sheegay inay labaatan qof ku dhaawacmeen weerarkan.
Cali-baashe Cabdilaahi Cabdi, oo ah agaasimaha Idaacada Mustaqbal ee Magaaladda Muqdisho oo joogay goobta qaraxu ka dhacay, ayaa yidhi “Ka dib salaadii makhrib, waxaan tagay xeebta Lido,halkaasi oo ay ku yaallaan dhawr muqaaxiyood. Markii aan ku sugnaa illaa soddon daqiiqadood oo aan wakhti kula qaadanayay saaxiibadey oo ay ku jiraan xataa Suxufiyiin, ayaanu aragnay rasaasta nagu hoobanaysa.”
“Tiro dad ah ayaa dhinac walba iga xigay, waxa ka socday Hoolka Huteelka xaflad aroos, markaas waxaanu bilownay inaanu cagaha wax ka deyno oo u cararno dhinacii albaabka, hase yeeshee intii aanaan gaadhin waxa aanu maqalay qarax weyn,”ayuu intaas raaciyay.
Cali-baashe Cabdilaahi oo hadalkiisa sii watay waxa uu yidhi “Waxaan arkay dad ka soo boodaya daqa labaad. Rasaastuna goobta oo dhan bay hadhaysay, markaa ka dibna waxa jiray qarax kale. Intaas ka dib qof waliba wuu weeraray. Waxaan shakhsiyan indhahayga saaray saddex qof oo dhaawac ah,laakiin maan arki karayn ciddii uu waxyeeleeyeen qaraxyaddu. Waxaan u malaynayaa baabuurka waxa la hor dhigay albaabka weyn ee Huteelka.”
Xeebta Lido, waxay ku taalla cidhifka waqooyi ee magaaladda Muqdisho, waxaana u tamashle iyo nasasho tagay kumanaan dhalinyaro Soomaali ah. Dhawr huteel ayaa cidhifka xeebta laga furay sannadihii u dambeeyay, dadkuna waxay fadhiyaan huteelka hortiisa markii weerarkani bilowday.
AL-Shabaab, oo ku xidhan Al-Qaeda, ayaa laga saaray Muqdisho 2011-kii, laakiin wali waxay joogtaa deegaamo balaadhan oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya.
Kooxdani waxay qarxiyeen toddobaadkii hore fadhiisin ay ciidammada midowga afrika lahaayeen, halkaasi oo ay ku dileen tobaanaan ka mid ah ciidamadda Kenya.”